China Hydrolyzed Collagen ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Collagen ene-Hydrolyzed esetshenziswa kabanzi njengesengezo sokudla enyameni ukuthuthukisa ubumnene bezicubu ezixhuma; isetshenziswe njenge-emulsifier emikhiqizweni yobisi; isebenza kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo yesoseji; isetshenziswe njengamafilimu okupakisha izithelo ezigciniwe; okokumboza ebusweni bokudla.
Izinto zokusetshenziswa eziyinhloko ze-hydrolyzed collagen ngamathambo nezikhumba zezinkomo, inhlanzi, izingulube nezinye izilwane.I-Hydrolyzed collagen uhlobo lwamaprotheni aphezulu wamangqamuzana, aqukethe ama-amino acid angaphezu kweshumi nambili adingwa ngumzimba womuntu. Inothile ngokudla okunomsoco futhi kulula ukumunca. Ngakho-ke, isetshenziswa kakhulu kuziphuzo zamandla nokudla, imigoqo yokudla okunempilo, izixazululo zesikhumba zokulwa nokuguga kanye nesengezo sokudla.I-collagen ene-Hydrolyzed i-collagen emane yehlukaniswe yaba amayunithi amancane amaprotheni (noma ama-collagen peptides) ngenqubo ebizwa nge-hydrolysis. Lezi zingcezu ezincane zamaprotheni zikwenza kube njaloi-collagen ene-hydrolyzed ingancibilika kalula kuziphuzo ezishisayo noma ezibandayo, okwenza kube lula kakhulu ukwengeza ikhofi yakho yasekuseni, i-smoothie, noma i-oatmeal. Lezi zingxenye ezincane zamaprotheni nazo zilula kuwe ukuthi uzigaye futhi uzimunce, okusho ukuthi ama-amino acid angasebenza emzimbeni.
I-collagen ene-Hydrolyzed (HC) yiqembu lama-peptide anesisindo esiphansi samangqamuzana (3-6 KDa) angatholwa ngesenzo se-enzymatic kwimidiya ye-asidi noma ye-alkaline endaweni ethile yokushisa ekufukameleni. I-HC ingakhishwa emithonjeni ehlukene njengezinkomo noma i-porcine. Le mithombo yethule ukulinganiselwa kwezempilo eminyakeni edlule. Muva nje ucwaningo lukhombise izakhiwo ezinhle ze-HC ezitholakala esikhunjeni, esikalini nasemathanjeni avela emithonjeni yasolwandle. Uhlobo nomthombo wokukhishwa yizinto eziyinhloko ezithinta izakhiwo ze-HC, njengesisindo samangqamuzana sechungechunge lwe-peptide, ukuncibilika, nomsebenzi wokusebenza. I-HC isetshenziswa kabanzi ezimbonini eziningana kubandakanya izimboni zokudla, ezemithi, zezimonyo, zemvelo nezesikhumba.
Langaphambilini Inhlanzi Collagen Peptide
Olandelayo: I-Gelatin ene-Hydrolyzed